Qalqal amni oo ka jira Baydhabo iyo qarax kale oo caawa ka dhacay | Dhacdo
Qalqal amni oo ka jira Baydhabo iyo qarax kale oo caawa ka dhacay
Toddobadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Baydhabo laga dareemay amni-darro, ka dib markii ay ku soo bateen qaraxyada iyo weerarada hoobiye-yaasha ay magaaladaasi ka gaysanayan maleeshiyada Al Shabaab.
Caawa oo ugu dambeysay waxaa Xarunta Gobolka Baay ee Magaalada Baydhabo ka dhacay qarax, kaasoo ahaa bambo lagu weeraray hoyga mid ka mida Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed.
Bambada ayaa lagu tuuray hoyga Wasiirka Tamarta & Biyaha Koonfur Galbeed, Imaan Cali Cabdi (Imaan Goobe), oo ku yaala xaafadda Onodka.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Dhacdo.com u sheegay in xilligii uu qaraxu dhacayay uu Wasiir Goobe ku sugnaa hoygiisa, waxaana la tilmaamay in qaraxaasi ku dhaawacmay mid ka mida ilaaladiisa.
Ilaalada Wasiirka ayaa qaraxaasi ka dib furay rasaas xoogan, mana jirto khasaaro la’ogyahay oo rasaastaasi ka dhalatay, sidoo kalana askarta ayaa waxaan jirin cid ay qaraxaasi u soo qabteen.
Xalay ayay ahayd markii uu qarax miino ka badbaaday Wasiir Kuxigeenka Amniga Koonfur Galbeed, Colaad Maxamed Cali. Qaraxan ayaa ka dhacay halka loo yaqaano Isgoyska Samafone, waxaana daqiiqado ka dib halkaasi ka dhacay qarax kale oo bambo ahaa.
Goobjooge ayaa sheegay inuu arkay laba qof oo ku dhaawacantay qaraxyadaasi, iyadoo uu mid ka mida ku sheegay ilaaada Wasiir Colaad.
Falalka amni-darrada ee ka jira Magaalada Baydhabo ayaa ku soo aadaya, xilli magaaladaasi ay isu diyaarineyso martigelinta Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya.
21-kii bishii October ayay ahayd markii uu Taliyaha Qaybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Sheekh Cabdullaahi (Ciiro) uu sheegay in Shabaabka ay Magaalada Baydhabo soo geliyeen dad dharcad ah.
“Magaalada Baydhabo waxay u soo direen dad dharcad ah oo iyaga la shaqeeya, oo bulshada ku dhex jira, sidaasi daraadeed ciidamada amniga, gaar ahaan Nabad Suggida iyo Booliska waxaa la farayaa inay si gaar ah u bartilmaameedsadaan, waxaana rajeyneynaa inaan ka guuleysano cadowga.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha waxa uu xilligaa sheegay in ujeedka Shabaabka uu yahay inay carqaladeeyan geedi-socodka hannaanka doorashada ee dalka.